650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > ဖိုင်ဘာလေဆာ module တွေ > 650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module
Full-band လှိုင်းအလျားလေဆာအလင်းအရင်းအမြစ် module တွင်လေဆာလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကိုသေချာစေရန် DFB ဆီမီးကွန်ဒတ်တာလေဆာများ၊ တစ်ခုတည်းသောဖိုင်ဘာထုတ်လွှတ်မှု၊ ချိန်ညှိနိုင်သည့်စွမ်းအင်၊ ကျွမ်းကျင်စွာဒီဇိုင်းမြင့်မားသော၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသောလက်ရှိထိန်းချုပ်မှုဘုတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လွယ်ကူသည်, ကျယ်ပြန့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, ဆက်သွယ်ရေး, ဆေးကုသမှု, ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဇီဝအင်ဂျင်နီယာနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ၏ 1. နိဒါန်း
650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ၏ 2. အင်္ဂါရပ်
ပါဝါ 1-10mW (ခလုတ်အားဖြင့်ချိန်ညှိ);
Single-mode သို့မဟုတ် multi-mode fiber fiber output;
650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ၏ 3. လျှောက်လွှာ
Fiber optic sensing၊
Optical Fiber ဆက်သွယ်ရေး၊
650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ၏ Optical-Electrical လက္ခဏာ
Spectrum width ကို(-20dB)
ဘေးထွက် mode ကိုဖိနှိပ်မှုအချိုးအစား
ပါဝါတည်ငြိမ်မှု (ကာလတို ၁၅ မိနစ်)
0.0 ± 0,02
ပါဝါတည်ငြိမ်မှု (ရေရှည် 8 နာရီ)
0.0 ± 0.05 â
200 (L) × 150 (W) × 70 (H)
6.5050mm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module ၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
A: ကျနော်တို့ 650nm, 1270nm-1650nm ရှိသည်။
Q: အထုပ်အတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တွင်လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား။
hot Tags:: 650nm-1650nm DFB လေဆာအရင်းအမြစ် module၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူများ၊ စက်ရုံနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများ၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်၊